ချယ်လ်ဆီး က ထွက်ခွာ ဖြစ်ရင် ဘယ်မှာ ဆက်ကစားနိုင်လဲ ဆိုတာ အရိပ်အမြွက် ဆိုလိုက်တဲ့ #ဂျရူး - SPORTS MYANMAR
ချယ်လ်ဆီး က ထွက်ခွာ ဖြစ်ရင် ဘယ်မှာ ဆက်ကစားနိုင်လဲ ဆိုတာ အရိပ်အမြွက် ဆိုလိုက်တဲ့ #ဂျရူး
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ဟာ ယခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ အကုန် မှာ အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသက် ၃၂ အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဂျရူး ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ် က ပရီးမီးယားလိဂ် ကို အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ အတူ စတင် ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ဂျရူး ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း မှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် မသေချာ ခဲ့မှု နဲ့ အတူ မြို့ခံ ပြိုင်ဖက် ချယ်လ်ဆီး အသင်း သို့ ၂နှစ် စာချုပ် နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပါတယ် ။ ဂျရူး ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ၂ခု ကျော်ဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ကာ အက်ဖ်အေ ဖလား နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ဖလား တို့ကို အသီးသီး ဆွတ်ခူး ထားနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် လည်း စရောက်ရောက်ချင်း ကာလ မှာပဲ ဂျရူး ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ပုံမှန် ကစားခွင့် တချို့ ရရှိ ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကလည်း မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ လက်အောက် မှာ ဂျရူး ဟာ ပုံမှန် ကစားခွင့် အတော် များများ ပျောက်ဆုံး ခဲ့ရပြီး ယူရိုပါလိဂ် မှာသာ ကစား နေခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ဖရန့် လမ်းပတ် လက်အောက် မှာလည်း ဂျရူး ဟာ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲ တခု ကိုသာ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာလည်း လက်စတာ နဲ့ တပွဲ ပဲ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အပြင် လူငယ် တိုက်စစ်မှူး အေဘရာဟမ် ဟာလည်း နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ပွဲ မှာ ၄ဂိုး ဆက်တိုက် သွင်းခဲ့တာကြောင့် ဂျရူး အဖို့ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် ပိုပြီး ရုန်းကန် ရနိုင်ပါတယ် ။
RMC Sport နဲ့ အင်တာဗျူး မှာတော့ ဂျရူး က သူ့ အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ စာချုပ် ပြည့်သွားခဲ့ရင် အမေရိကန် မေဂျာလိဂ် မှာ သွားရောက် ကစားဖို့ စဉ်းစား ထားကြောင်း အရိပ်အမြွက် ဆိုလိုက်သလို ၊ လောလောဆယ် မှာတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကနေ စွန့်ခွာဖို့ ဆန္ဒ မရှိသေးကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ဂျရူး က ” ကျွန်တော် အပါအဝင် ၊ ကျွန်တော့ ရဲ့ ကလေး တွေ နဲ့ မိသားစုဝင် တွေဟာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား ကို တတ်ကျွမ်း ထားတာကြောင့် မေဂျာလိဂ် ဟာ ကျွန်တော့ အတွက် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ လိဂ် တခု ဖြစ်ပါတယ် ။ လာမယ့် တနှစ်လား ? ၂နှစ်လား ? ဘယ်အချိန် ဖြစ်မလဲ တော့ ကျွန်တော် လည်း မပြောတတ်သေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဟာ ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ နောက်ဆုံး စိန်ခေါ်မှု အတွက် လမ်းဖွင့် ထားဆဲ ပါပဲ ။
” မေဂျာလိဂ် မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့ ကို ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ လိဂ် တခု ကို သွားနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကုန်ခါနီး မှာ ကျွန်တော် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ စာချုပ်သစ် တနှစ် ချုပ်နိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ အတွက် ကလပ် နဲ့ ကျွန်တော့ အကြားမှာ ထွေထွေထူးထူး ဆွေးနွေး လိုက်တာမျိုး မရှိပါဘူး ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဖက်က ကျွန်တော့ ကို ဒီ ရာသီ အတွက် အသုံးလိုတာကြောင့် စာချုပ် သက်တမ်း တိုးခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော့ ဖက်က ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်လဲ ၊ ဘာတွေ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိပါတယ် ။ ဒီထက် သာလွန်ကောင်း ၊ သာလွန် သွားနိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့ မှာ ထူးခြား ဆန်းပြား တဲ့ ယုံကြည်မှု တခု ရှိနေပါတယ် ။ ဒီ့အပြင် ကျွန်တော် ဟာ ချယ်လ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာဖို့ တခါမှ မစဉ်းစား ခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း တခါမှ မေးခွန်း မထုတ် ခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ခယျြလျဆီး က ထှကျခှာ ဖွဈရငျ ဘယျမှာ ဆကျကစားနိုငျလဲ ဆိုတာ အရိပျအမွှကျ ဆိုလိုကျတဲ့ #ဂရြူး
ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ဝါရငျ့ တိုကျစဈမှူး အိုလီဗီယာ ဂရြူး ဟာ ယခုနှဈ ဘောလုံး ရာသီ အကုနျ မှာ အသငျး နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး ကုနျဆုံးတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ အသကျ ၃၂ အရှယျ ရှိပွီ ဖွဈတဲ့ ဂရြူး ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ရနှဈ က ပရီးမီးယားလိဂျ ကို အာဆငျနယျ အသငျး နဲ့ အတူ စတငျ ရောကျရှိ လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ ဂရြူး ဟာ အာဆငျနယျ အသငျး မှာ ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ မသခြော ခဲ့မှု နဲ့ အတူ မွို့ခံ ပွိုငျဖကျ ခယျြလျဆီး အသငျး သို့ ၂နှဈ စာခြုပျ နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပါတယျ ။ ဂရြူး ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ၂ခု ကြျောဖွတျထားပွီး ဖွဈကာ အကျဖျအေ ဖလား နဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ဖလား တို့ကို အသီးသီး ဆှတျခူး ထားနိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။
သို့ပမေယျ့ လညျး စရောကျရောကျခငျြး ကာလ မှာပဲ ဂရြူး ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ပုံမှနျ ကစားခှငျ့ တခြို့ ရရှိ ခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကလညျး မျောရဈဇီယို ဆာရီ လကျအောကျ မှာ ဂရြူး ဟာ ပုံမှနျ ကစားခှငျ့ အတျော မြားမြား ပြောကျဆုံး ခဲ့ရပွီး ယူရိုပါလိဂျ မှာသာ ကစား နခေဲ့ရပါတယျ ။
ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ဖရနျ့ လမျးပတျ လကျအောကျ မှာလညျး ဂရြူး ဟာ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလျလုပှဲ တခု ကိုသာ ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိ ခဲ့တာ ဖွဈကာ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာလညျး လကျစတာ နဲ့ တပှဲ ပဲ ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိ ခဲ့ပါတယျ ။ ထို့အပွငျ လူငယျ တိုကျစဈမှူး အဘေရာဟမျ ဟာလညျး နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ၂ပှဲ မှာ ၄ဂိုး ဆကျတိုကျ သှငျးခဲ့တာကွောငျ့ ဂရြူး အဖို့ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ ပိုပွီး ရုနျးကနျ ရနိုငျပါတယျ ။
RMC Sport နဲ့ အငျတာဗြူး မှာတော့ ဂရြူး က သူ့ အနနေဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ စာခြုပျ ပွညျ့သှားခဲ့ရငျ အမရေိကနျ မဂြောလိဂျ မှာ သှားရောကျ ကစားဖို့ စဉျးစား ထားကွောငျး အရိပျအမွှကျ ဆိုလိုကျသလို ၊ လောလောဆယျ မှာတော့ ခယျြလျဆီး အသငျး ကနေ စှနျ့ခှာဖို့ ဆန်ဒ မရှိသေးကွောငျး ဖှငျ့ဟ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
ဂရြူး က ” ကြှနျတျော အပါအဝငျ ၊ ကြှနျတော့ ရဲ့ ကလေး တှေ နဲ့ မိသားစုဝငျ တှဟော အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကား ကို တတျကြှမျး ထားတာကွောငျ့ မဂြောလိဂျ ဟာ ကြှနျတော့ အတှကျ စိတျဝငျစား စရာ ကောငျးတဲ့ လိဂျ တခု ဖွဈပါတယျ ။ လာမယျ့ တနှဈလား ? ၂နှဈလား ? ဘယျအခြိနျ ဖွဈမလဲ တော့ ကြှနျတျော လညျး မပွောတတျသေးပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ဟာ ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ နောကျဆုံး စိနျချေါမှု အတှကျ လမျးဖှငျ့ ထားဆဲ ပါပဲ ။ ”
” မဂြောလိဂျ မှာ မဟုတျပါဘူး ။ ကြှနျတော့ ကို ဆှဲဆောငျ နိုငျတဲ့ လိဂျ တခု ကို သှားနိုငျပါတယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကုနျခါနီး မှာ ကြှနျတျော ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ စာခြုပျသဈ တနှဈ ခြုပျနိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။ ဒီ အတှကျ ကလပျ နဲ့ ကြှနျတော့ အကွားမှာ ထှထှေထေူးထူး ဆှေးနှေး လိုကျတာမြိုး မရှိပါဘူး ။ ခယျြလျဆီး အသငျး ဖကျက ကြှနျတော့ ကို ဒီ ရာသီ အတှကျ အသုံးလိုတာကွောငျ့ စာခြုပျ သကျတမျး တိုးခဲ့ပါတယျ ။ ”
” ကြှနျတော့ ဖကျက ဘာတှေ လုပျပေးနိုငျလဲ ၊ ဘာတှေ စှမျးဆောငျ ပေးနိုငျလဲ ဆိုတာ သူတို့ ကောငျးကောငျး သိပါတယျ ။ ဒီထကျ သာလှနျကောငျး ၊ သာလှနျ သှားနိုငျပါတယျ ။ ကြှနျတော့ မှာ ထူးခွား ဆနျးပွား တဲ့ ယုံကွညျမှု တခု ရှိနပေါတယျ ။ ဒီ့အပွငျ ကြှနျတျော ဟာ ခယျြလျဆီး ကနေ ထှကျခှာဖို့ တခါမှ မစဉျးစား ခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို လညျး တခါမှ မေးခှနျး မထုတျ ခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။